Mayelana ne-Sharjah | Inkampani Yomthetho Eklonyelisiwe
indawo enobungani bomndeni
Phambilini yaziwa njengeTricial States noma iTrucial Oman, iSharjah ingowesithathu omkhulu futhi onabantu abaningi kakhulu e-UAE. USharjah, naye opelwe ngokuthi I-Al-Shāriqah ("EMpumalanga") iyazi kahle ngenxa yezindawo zayo ezinhle zomhlaba nezintaba zasolwandle. Inendawo engama-2,590 sq. Km futhi ithatha amaphesenti angama-3.3 endaweni yonke ye-United Arab Emirates (iziqhingi azihlanganisi).
indawo oyithandayo yabaninimabhizinisi
Imakethe yezindawo ezikhula ngokushesha
ISharjah iyidolobha elikhulu le-Emirates of Sharjah futhi ihlanganyela ubudlelwane obufanayo bezamasiko nezepolitiki nabanye i-Emirates. Kuhanjelwa izivakashi eziningi ngenxa yokuhlangana kwawo namasiko.
Ngezikhungo ezahlukahlukene zemfundo, uSharjah uqinisekisa ukutholakala okungapheli kwethalente elisha elihlome ngolwazi lwakamuva kwezesayensi, ezobuchwepheshe, ezobunjiniyela namanye amakhono athuthukisa ukukhula komnotho. Ngokwendawo, iSharjah itholakala ngqo eDubai futhi i-emirate igcwala izikhala eziluhlaza okumangalisayo.
Futhi kuyindawo eyazisa impilo yangaphandle futhi igubha indlela yokuphila enothisayo yomphakathi kubahlali nezivakashi ngokufanayo. Nazi izinto ezimangalisa kakhulu okufanele uzazi ngeSharjah:
Inani labantu baseSharjah lalingama-2,000 1950 ngo-2010, kepha ngo-78,818 inani labantu base-UAE abasendaweni yaseSharjah balinganiselwa yiFederal Competitiveness and Statistics Authority ukuthi babe ngama-74,547 (Abesilisa) kanye nama-153,365 (Abesifazane) okuletha inombolo ibe yi-1,171 ephelele . Ngokwesilinganiso soMnyango Wezibalo Nokuthuthukiswa Komphakathi, inani labantu baseSharjah laliyi-097, 2012 e2015, futhi kusukela ngo-409,900 iSharjah ikhule ngama-5.73 amele ushintsho lwaminyaka yonke olungu-XNUMX%.
Ku-2020, inani labantu bakaSharjah lilinganiselwa ukuthi liyi-1,684,649. Lokhu kulinganiselwa kwenani labantu nokuqagela kuvela ekubuyekezweni kwe-UN World Urbanization Prospects kanti ukulinganisa futhi kumele ukuhlangana kweDolobha laseSharjah okwenzekayo. Zingaphezu kwezigidi eziyi-1.2 izifiki ezihlala eSharjah, ze-Emeratis, inani labesifazane lidlula abesilisa kepha inani labadingiswa besilisa likhulu kakhulu kunabesifazane.
UMnyango Wezibalo kanye Nezokuthuthukiswa Komphakathi ulinganisa inani labantu baseSharjah abane-Emiratis abangaphezulu kuka-175,000. Ukwehla kwesibalo sabantu ngeminyaka yobudala kukhombisa abangama-20 kuye kwangama-39 njengeqembu elikhulu elinabantu abangaphezu kwama-700,000. Bangaphezu kuka-57,000 abafundi besikhathi esigcwele abahlala eSharjah. Cishe bangama-40,000 abantu abangasebenzi. Iningi labantu ngaphakathi kwedolobha lisebenzela izinkampani ezizimele, kepha cishe bangama-75,000 abasebenzela ohulumeni basekhaya noma bohulumeni.
Isi-Arabhu siwulimi olusemthethweni eSharjah, kepha isiNgisi lolunye ulimi olukhulunywa kulo lonke idolobha. Futhi, kunezinye izilimi ezikhulunywa kufaka phakathi isiHindi nesi-Urdu.
Iningi lezakhamizi lilandela inkolo yama-Islam kanye nendlela yokuphila yabantu eSharjah ikhombisa ukunamathela ezimisweni zamaSulumane. Kunemithetho eqinile yomthetho wokuqalwa komphakathi eyaqalwa ngo-2001 eyenqabela abesilisa nabesifazane abangahlobene nomthetho ukuba babonwe esidlangalaleni, futhi bayala ikhodi yokugqoka eqinile yibo bobabili ubulili. Lokhu kuyefana nangemithetho yezivakashi nayo.
USharjah ungukuphela kwe-Emirate ku-UAE enqabela ukusetshenziswa nokuthengisa kotshwala ngelayisense. NgoLwesihlanu nangoMgqibelo kwenziwe amaholide okuhlonipha usuku lwamaSulumane lomkhuleko olungoLwesihlanu. Kodwa-ke, kunemiyalo eyengeziwe yokuziphatha komphakathi okufanelekile phakathi nenyanga engcwele yeRamadan lapho iningi labantu abasedolobheni lizila ukudla.
ISharjah inemakethe ethengisayo ekhula ngokushesha. I-Emirate ibone ukukhuphuka kwenzalo yabatshalizimali kuwo wonke ama-Middle East nangale lapho uhulumeni enqume ukuthengisa izakhiwo kuwo wonke amazwe ngonyaka we-2014.
USharjah manje uyindawo ayithandayo yabaninimabhizinisi. Inezingqalasizinda zesimanjemanje, imithetho evumelana nebhizinisi futhi isekela izindlela ezintsha zokuqamba namabhizinisi. Leli thimba linendawo eyindawo yokuhlala, okuhlala kuyo amabhizinisi amancane angaba ngu-45,000 agxile kwezokuthengiswa kwezakhiwo, ezokukhiqiza, ezempilo, ezemfundo, ezokuvakasha, igesi, ezokuhlinzeka ngezinsiza kanye nezinsizakalo ezimbalwa zebhizinisi.
Ukukhiqiza kungumthombo obalulekile wezomnotho waseSharjah futhi kunikela cishe ngamaphesenti ayi-19 we-GDP yayo yaminyaka yonke. I-GDP yayo ifinyelele cishe ku-AED 113.89 billion ngo-2014. I-Emirate inezindawo eziyi-19 zezimboni ezinikela ngaphezu kwamaphesenti angama-48 emiphumeleni yezimboni yase-UAE.
ISharjah inamachweba amathathu nendawo ephelele ye-49,588,000 sq km. Futhi, inezindawo ezimbili zamahhala, iSaif Zone neHamriyah Zone. Futhi, i-Expo Center Sharjah ingesinye sezikhungo zokuhweba ezaziwa kakhulu eSharjah ezisingatha imicimbi ehlukahlukene ye-B2B ne-B2C.
ISharjah iyikhaya elinamabhizinisi amaningi. Izinkampani eziningi zisungule lapha kusukela ekuqaleni futhi amabhizinisi amaningi andise izikhungo zazo zezifunda kule ndawo. Ukuqala ibhizinisi ngeSharjah kuyinto ongathanda ukuyicubungula.
ISharjah iyinhloko-dolobha yezobuciko e-United Arab Emirates. Idolobha liziqhayisa ngamabhishi akhangayo, amapaki omphakathi, iminyuziyamu, izilwane zasendle kanye nokuheha okuningi kwe-Arabhu njenge-Al Majaz Waterfront, Kalba, Al Noor Mosque, Eye of the Emirates, nokunye okuningi.
Abadumile ISharjah Museum of Impucuko YamaSulumane kanye ne-Art Museum yizindawo ezinkulu eziheha izivakashi kuleli dolobha kanti ngenkathi i-Heritage Area igcwele izakhiwo ezithokozisayo ezibonisa umlando we-Emirati.
ISharjah yindawo ekahle elungele umndeni engajatshulelwa wumndeni wonke, kusuka ezinganeni kuya kogogo nogogo ngokuhlanganyela. Izingane zingajabulela izinketho zokuzijabulisa ezibanzi kanti abantu abadala bangathola induduzo emibukisweni yobuciko nasezikhumbuzo zomlando.
ISharjah iwuphawu lwesiko, ubuhlakani nokushintsha kwezakhiwo e-UAE.
I-UNESCO yanikeza uSharjah isihloko seCultural Capital ye-Arab World ngonyaka we-1998, kwathi ngonyaka wezi-2014 yathola isihloko seDolobha Lamasiko amaSulumane. Kusukela lapho, uSharjah ulondoloze ukuzibophezela kwakhe kusiko.
Njengesikhungo esimisiwe sesiko, iSharjah iyikhaya lezikhungo eziningi zokucwaninga zesayensi. Ngaphezu kokubaluleka kwayo kwamasiko, i-Old Sharjah yathola ukuheha okuningi nokubaluleka ngokuguqulwa kwezindlu nezakhiwo zayo zaba iminyuziyamu yokuhlobisa, izindawo zobuciko, imibukiso, ama-ateliers ama-calligraphers nabaculi beplastiki. Ngakho-ke, uSharjah uheha abacwaningi abaningi, abathanda ubuciko namasiko.
USharjah waziwa ngendima yakhe njengomvikeli oholayo wamagugu amasiko weqiniso nobuciko obuhle. Kuyaziwa futhi ngekhono lakhona lokwakha ubunikazi bamasiko obuvumelana nezimpande zawo amaSulumane ahlangana nezikhathi zakudala ngenkathi amukele amasiko amaningi wobuntu.